Accueil > Publications > Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika
« Newsletter n° 37
IREO FANAMBY TOKONY HATREHINA AO (...) »
publié par Admin, le samedi 30 août 2014
Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika, ho an’ny olom-boafidy sy ireo mahatapa-kevitra, ary ho an’ny Malagasy rehetra manahy momba ny ho avin’ny taniny Andriamatoa Filoha, Tompokovavy sy Tompokolahy
Ny tany malagasy dia harena voajanahary tsiriritin’ny hafa. Anisan’ny manahiran-tsaina ny mponina ny fiarovana sy ny fitsimbinana azy. Nanamarika izany ireo mpitondra vaovao. Ny fanapahan-kevitra voalohany noraisin’ny fivorian’ny Filan-kevitry ny Minisitra voalohany notarihin’ny Filoham-pirenena tamin’ny 29 janoary 2014 dia nandrara “ny fanalana, na famindrana tanteraka na ampahany, na fikarakarana antontan-taratasy mikasika fanomezana tanim-panjakana ho an’ny olon-kafa” ary izany dia “mandra-pitsangan’ny governemanta vaovao”(1). Fa inona kosa no hitranga ary ao aorian’izay ? (...)
Vakio ao amin’ny tovana etsy ambany ny tohiny.
NL31 Taratasy Misokatra 2014 Taratasy misokatra ho an’Andriamatoa Filohan’ny Repoblika, ho an’ny olom-boafidy sy ireo mahatapa-kevitra, ary ho an’ny Malagasy rehetra manahy momba ny ho avin’ny taniny (30 août 2014, PDF, 314 ko).